सैनिक शासनको पुनरागमनको चर्चा ! | SouryaOnline
सैनिक शासनको पुनरागमनको चर्चा !
फिलिपिन्समा मार्कोस जुनियरको उदय
सौर्य अनलाइन २०७९ वैशाख ३१ गते ७:४४ मा प्रकाशित
मनिला । फिलिपिन्सको निर्वाचनमा पूर्व तानाशाहका छोरा मार्कोस जुनियरको जीत बाहिरका मानिसका लागि आश्चर्यजनक हुनसक्छ, तर फिलिपिनीले उनको निरन्तरको उदयलाई देखेकाले त्यस्तो आकस्मिक मानेनन् । विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकले मार्कोस जुनियरको सफलतामा महत्वपूर्ण रहेका तत्वको वर्णन गरे जसको बलमा उनले मानव अधिकारकर्मी उम्मेदवार लेनी राब्रेडोलाई हराए ।
मार्कोस जुनियरको राष्ट्रपतिको अभियानको केन्द्रमा पिताको तानाशाही शासनलाई देशको इतिहासको ‘स्वर्ण युग’ देखाउने रहेको युनिभर्सिटी अफ फिलिपिन्सकी राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक मारिया इला एटिएन्जाले बताइन् । ‘मार्कोसले चुनावी अभियानमा वास्तवमा आफ्नोबारेमा केही भनिरहेकै थिएनन् । उनीको सम्पूर्ण उर्जा पिताको शासनलाई फिलिपिन्सको इतिहासको ‘सुनौलो युग’ देखाउने प्रयासमा खर्च भइरहेको थियो । यसमार्फत उनी मतदातामा पुरानो नोस्टाल्जिया महसुस गराइरहेका थिए ।’
मार्कोस जुनियरले उपराष्ट्रपतिको रुपमा पूर्व राष्ट्रपति रोद्रिगो दुतेर्तेकी छोरी सारा दुतेर्तेलाई चुने । शक्तिशाली राजनीतिक वंशका यी नेताहरुबीच नोभेम्बरमा एकअर्कालाई समर्थन गर्ने सहमती भएको थियो । सहमतीपछि राष्ट्रपतिको दौड सहभागी हुने सोच बनाएर बसेकी सारा उपराष्ट्रपति भएर मार्कोस जुनियरसँग ऐक्यबद्धता गर्न राजी भईन् ।
देश फर्किएको जम्मा तीन वर्षपछिको राष्ट्रपतीय चुनावमा उनकी आमा इमेल्डा मार्कोस पनि उम्मेदवार बनिन् । ‘उनले कुल खसेको मतको दोहोरो अंकको मत हासिल गरेकी थिइन् । १० प्रतिशतभन्दा बढी । तानाशाही शासन ढलेको जम्मा ६ वर्षभित्र सोही तानाशाही शासनकी एक प्रतिनिधिले यति धेरै मत ल्याउनु असाधारण कुरा थियो,’ होम्सले भने ।
तथापि उनको सिनेटर अवधि एक राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको जस्तो हुनुपर्ने हो, त्यति अविस्मरणीय नरहेको एटिएन्जाले बताइन ।
अर्कोतर्फ, मार्कोस जुनियरले गलत जानकारीबाट फाइदा उठाएका छन् । फ्याक्ट चेकरका अनुसार अनलाईनमा आउने ९२ प्रतिशतसम्म झुटा सूचना मार्कोसबारे राम्रो भनिएका हुन्थे । यसमा उनलाई विभिन्न सेलिब्रेटीहरू वा राज्य प्रमुखले समर्थन गरेका झुटा दाबीसमेत समावेश छन् ।
धेरैले मार्कोस जुनियरले उनका पूर्ववर्ती राष्ट्रपति रोदि«गो दुतेर्तेको लागुऔषध विरुद्धको युद्ध जारी राख्ने अनुमान गरेका छन ्। तर त्यसका लागि उनले रोद्रिगोले जस्तै पुलिस र सेनासँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउने सक्नेमा पनि अस्पष्टता छ । यसैले आगामी दिनमा फिलिपिन्स र विश्वको नजर मार्कोस जुनियरका काममाथि हुनेछन् ।